1. Ọtụtụ mmadụ ejirila kọmputa Windows rụọ ọrụ ogologo oge wee chọpụta na Mac siri ike iji, na-amaghị ihe igodo ndị dị ọkụ, ha amabeghị, ha akaghị, n’eziokwu, Mac bụ sistemụ kwụsiri ike. O nwere sistemụ nchedo mba ofesi zuru ụwa ọnụ nke dị mfe iji karịa ka ị chere. Taa, anyị ga-ewebata esi ewepụta screenshots nke Mac OS, nke dị ọtụtụ ma dịkwa mfe usoro.
2. Ihuenyo zuru oke site na ịpị Mgbanwe + Wụk + igodo 3 n'otu oge.
3. Mgbe a nụrụ ụda ọnyà ọnyà The weghaara nseta ihuenyo ga-azọpụta na na Desktọpụ na ike ga-eji dị ka mkpa.
4. Manual akuku jide site na ịpị Mgbanwe + Wụk + 4 igodo n'out oge.
5. Ga-ahụ akara ngosi "+" gburugburu cursor mouse. Jide aka ekpe pịa ma dọkpụrụ gafee mpaghara ịchọrọ gbaa. Mgbe hapụ ndị òké. Foto ndị ị sere ga-echekwa na desktọọpụ.
6. Ihe nlere nke onyonyo edere na akuku nhọrọ.
7. Ihuenyo na ihuenyo vidiyo site na ịpị Mgbanwe + Wụk + 5 igodo n'otu oge.
8. Usoro a ga - egosiputa menu ijide aka ịhọrọ dika egosiri na foto a.
9. A na-ahazi ọrụ nke menu ọ bụla site n'aka ekpe gaa n'aka nri: pt Wepụ ihuenyo niile ● Wepụ naanị windo na-arụ ọrụ ● Nchịkọta ihe ọkụkụ aka ● Dekọọ vidiyo ihuenyo niile ● Dekọọ vidiyo ihuenyo ahọrọ. Ntuziaka ● Nhọrọ nhọrọ ọzọ ● Capture ma ọ bụ Dekọọ - bido ndekọ vidiyo. Mgbe ndekọ vidiyo malitere, ị nwere ike ịkwụsị ndekọ n'oge ọ bụla site na ịpị akara "◻" n'elu nri menu nri. Mgbe ịpịrị pịa Kwụsị, vidiyo gị ga-echekwa na-akpaghị aka na Desktọpụ.
10. Na ebe a bụ ndụmọdụ aka ole na ole iji mee ka ihe dị elu mgbe Mac gị na-enyo enyo. A obere preview nke oyiyi image ga-egosipụta na ala nri akuku. Nwere ike iji òké pịa ma jide na preview oyiyi na ịdọrọ na dobe ya na akara usoro ihe omume ma ọ bụ google docs ka ibugharịa ma ọ bụ ịmaliteghachi ọrụ ozugbo.
11. Site na ihe atụ dị n’elu, enwere ike ịhụ na ndị mmepe OS Mac dị ka Apple na-a attentiona ntị na obere nkọwa ọrụ ha. Ọbụna na-ewere nseta ihuenyo na ọtụtụ ọrụ ịhọrọ site na. Na-azoputa a otutu oge ewepụtụ foto ma ọ bụ vidiyo. Ike mbubata faịlụ na-gabigara ma ọ bụ na-eji ozugbo. Enwekwara ndụmọdụ bara uru maka iji Mac OS iji nyere aka mee ka ọrụ gị dị mfe na ngwa ngwa. Pịa soro ebe nrụọrụ weebụ anyị iji nweta ozi ọma na isiokwu ndị anyị ga-edebe na oge ọzọ.